ကျနော် နပန်းသတ်ခဲ့ရသော Adverb များ (၂) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 7:53 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
Slowly, carefully, gently, awfully, .. စသည်ဖြင့် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ
နည်းဟန်တွေကို ပြတဲ့ adv တွေ ဖြစ်ပါတယ် ၊ အများအားဖြင့် Adj ကို ly ပေါင်းထားတဲ့ Adv တွေကို တွေ့ရတာများပါတယ် ၊ ၀ါကျထဲမှာ Verb ကိုအထူးပြုပါတယ် (-ly ပေါင်းထားပေမယ့်လည်း Adj တွေဖြစ်နေတဲ့ lovely, friendly တို့လို စကားလုံးတွေလည်း ရှိတဲ့အတွက် ly ပေါင်းတာကိုပဲ ပုံသေမှတ်လို့တော့ မရပါဘူး)
၀ါကျထဲမှာသုံးတဲ့နေရာတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် …………………………
(1.1) Object ရဲ့ နောက်မှာထားပါတယ် He drove the car CAREFULLY. သူက ကားကို သတိကြီးစွာဖြင့် မောင်းခဲ့တယ်
(~~ သတိထားးရမှာက verb နဲ့ object ကြားမှာ ထားလို့မရပါဘူး ၊ ဥပမာ ..He drove CAREFULLY the car. လို့မရေးရပါဘူး ။)
(1.2) Object မပါတဲ့ အခါမှာတော့ Main Verb ရဲ့ နောက်မှာ ထားနိုင်ပါတယ် He swims WELL. သူကောင်းစွာ ရေကူးတယ်
He GENTLY kissed the sleeping girl. သူက အိပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးကို ညင်သာစွာ နမ်းခဲ့တယ် ။
(1.4) ၀ါကျအလယ် verb ရဲ့ရှေ့မှာထားတဲ့ပုံစံကို passive voice sentence တွေမှာ ပိုပြီးရေးလေ့ရှိပါတယ် Mid-position (after all auxiliary verbs) is especially common with passive verbs.
ကားမောင်းတဲ့သူဟာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါပြီ …………………………..
(1.5) ၀ါကျရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာထားပြီး ၀ါကျကို စိတ်ဝင်စားစေဖို့ အတွက်ဖြစ်စေ ၊ ရှေ့ဝါကျနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ ဖြစ်စေ သုံးလေ့ရှိပါတယ် ။ ဥပမာ.. ကျနော်က Amazingly, ( အံ့သြစရာပဲ) လို့ဝါကျကို စလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ ၊
စာဖတ်သူက ဘာများအံ့သြစရာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ သိချင်စိတ်က ပေါ်လာပြီး နောက်ဆက်ရေးမယ့် အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားသွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်..
အံ့သြဖွယ်ရာပါပဲ ကိုဝင်းနိုင်ဦးဟာ ကံမစမ်းပါပဲနဲ့ (ထီမထိုးပဲနဲ့) နိုင်ငံခြားထီ ပေါက်ခဲ့ပါတယ် (မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်တာကို ဦးစားပေးပြီး ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် amazingly ကို ရှေ့ဆုံးမှာ ထားလိုက်တာပါ ၊ ထီပေါက်တာကို အဓိက ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး)
(1.6) အရည်အသွေး (သို့) ထူးခြားတဲ့စရိုက် သဘာဝကို ဖေါ်ပြဖို့အတွက် Adj တစ်ခုရဲ့ ရှေ့မှာလည်း ထားပြီး သုံးတတ်ပါတယ် (An adverb for manner is placed before an adjective. It modifies the quality or character of the
adjective.) He was INTENTIONALLY silent.
He ran LIKE A RABBIT. သူက ယုန်တစ်ကောင်လို ပြေးခဲ့တယ်
Ina( adj ending with –ly) way ဆိုတဲ့ စကားစု phrase
လေးကို နောက်ဆုံးမှာဖြည့်ပေးလိုက်ပါ ၊ ဒါပါပဲ ။ If an adjective ends in –ly we use the phrase ina…. way to express manner:
(1.9) Adv of Manner ဟုတ်မဟုတ် သိဖို့ရာကတော့ how ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးနဲ့ မေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး ၊ မေးခွန်းလေးရဲ့ အဖြေ ကိုက်ညီနေရင် Manner adv လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် .. အထက်က adv တွေကို အဖြေကိုက်မကိုက် စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါလား ………………………………..
ကဲ စည်းမျဉ်းတွေက တော်တော်များသွားခဲ့ပြီ ၊ ကျနော်ကြိုးစားစုဆောင်းထားခဲ့တာပါ ၊ သေချာအောင်လည်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါတယ် ၊ ဒါတောင်မှ ယေဘူယျတွေပဲ ရှိပါသေးတယ်
၊ တချို့ adv တွေက သီးခြားသုံးစွဲပုံတွေရှိကြပါတယ် ၊ ပြီးတော့ English နဲ့
American နေရာထားပုံချင်း မတူတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် ၊ အားလုံးကိုတော့ ကျနော်တို့ သိဖို့မလွယ်ပါဘူး ၊ သို့သော်လည်း အခုလောက်သိလျှင်ကိုပဲ ကျနော်တို့ အဆင်ပြေအောင် သုံးလို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်..
. မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့